Lubbuun hoganootaa fi jaallan keenyaa dorgommii qumaarri siyaasaa ittiin xabatamu miti – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooLubbuun hoganootaa fi jaallan keenyaa dorgommii qumaarri siyaasaa ittiin xabatamu miti
Lubbuun hoganootaa fi jaallan keenyaa dorgommii qumaarri siyaasaa ittiin xabatamu miti.
Ibsa Ejjannoo Hoganootaa fi Qondaalotaa ABO Biyya Ambaa
Itti yaadamee fi saganteessamee toorra qunnamtii HD ABO, Jaal Dawud Ibsaa, irraa kutuun rakkoo siyaasaa biyyattii keessa jiru hameessa malee furmaata hin fidu. Yakkaa fi balaa qabaachuu qofa osoo hin taanee qaama bifa kanaan shororkeessummaa gaggeessuuf yaalaa jirus itti gaafachiisa. Gatiin biyyattii baasisuuf deemu illee saphlaa tahuuf hin jiru. Qaamni kam illee kana dursanii hubachuun akkaan barbaachisa.
Guyyaa ABO tokko jedhee karaa nagaa kaayyoo fi sagantaa isaa ummata Oromoo fi Oromia keessatti ifatti gaggeessuuf biyya seene irraa jalqabee duullii fi danqaan bifa gara garaan mootummaa Ethiopia dhaaba kana irratti gaggessamu addaan hin cinne. Dhaaba kallacha saba Oromoo wareegama ilmaan Oromoo kumaatamaan jiraachisame diina innikkaa jechuun moggeessanii itti duulutti dabalee waggoota lamaan dabran keessa lubbuun ilmaan Oromoo dhibboota kumaan lakkaayaman itti kufanii jiran. Hogantootni, qondaalotni, miseensotni fi deggertootni ABO kumootaan lakkaayaman manneen hidhaatti guyyuu ugguramaa jiran. Haala kana ABO irra deddeebi’ee ‘gara nagaatti deebi’uu qofti furmaata akka fiduu danda’u’ ibsaa ture.
Haa tahu malee mootummaan Ethiopia kara nagaa furmaata barbaaduu irra inumaa iyyuu HD ABO, Jaal Dawud Ibsaa humna waraanaa fi tikaan marsamee mana jireenya isaa keessatti hidhame. Toorri quunnamtiis irraa cite. Tarkaanfii waraanaa fi humna tikaatti dabalee shirri mootummaa Ethiopia, yoo danda’e ABO shororkeessuu fi facaasuuf tattaafataa jirus torban kana keessa caalaatti ifa bahe.
Osoo ABO yakka ajjechaa Artist HaCaaluu Hundeessaa irratti raawwatame qaama walaba taheen qoratamee ummata biyyaaf ifa akka tahu gaafataa jiruuu, yeroo dhaabni kun ilmaan Oromoo shira siyaasaatiin hidhaman akka gadi lakkisaman falmaa jiru keessatti, yeroo ABO caalaatti kara itti nagaan biyyattii keessatti argamuu
danda’u irratti fala barbaachisan hunda akeekaa jirutti duulli shiraan guutame bifa hundaan itti bobbaasamaa jira.
Shira kana milkeessuuf mooraa qabsoo Oromoo tasgabbii dhorkuuf hoganoota kaan hidhaa fi dhabamsiisaa, HD ABO irraa qunnamtii bifa hundaa kutaa fi tika humna waraanaa jalatti eegaa shira yakkaa fi dharaatiin mooraa qabsoo Oromoo jeequuf yaaluun bifa kamiin illee dura dhaabbatama.
Kanaaf, shira qabsoo isaa irratti xaxamaa jiru ummatni keenya alaa fi biyya keessaa, qabsaawotni fi deggertootni keenya akka hubattan isiniif dhaamna. Ibsa ejjannoo itti aanu kanas haala waliigalaa kana irraa ka’uudhaan baasne:
Hidhaa, ajjechaa, dararaa fi shororkaa qaamni mootummaa kara bitamtootaa fi sab-gantootaa deemsa galii bilisummaa saba keenyaa jeequuf yaalu hunda dammaqinaan dura dhaabbanna.
Qabsoo Bilisummaa Oromo fedhii dhunfaaf jacha warri shira hojjachaa jiran hatattamaan siriiti qoratamni Koree Seeraafi Tohannoof akka dhihatan gaafachaa hamma sanu guutumatti Hojjiirraa akka dhabbatan gaafanna.
Jeequmsa moora qabsoo Oromoo keessatti uumuuf tattaafatamaa jiru balaaleffataa gurmuu tokkummaa fi qabsaawummaa keenyaa jabeessuuf kara nuuf danda’ame hundaan ni hojjenna.
Lubbuu fi nageenya hogantoota keenyaa qaqqaalii qabsoon saba keenyaa magarsite, kan jireenya fi lubbuu isaanii saba isaaniif wareegamaaf of kennan; kan karaa nagaatu mala jedhanii mootummaa Oromummaa qabaachuu himate kana waliin hojjatuuf waadaa seename fudhatanii biyya keessa nagaan sossoo’aa jiran; lubbuu fi nageenya isaaniitiif mootummaan Ethiopia yeroo kam iyyuu, bakka kamittuu itti gaafatamaa tahuu akka hubatamu gadi jabeessinee hubachiisna.
Qabsoon keenya mootummaa PP kan biyya bulchaan jira ja’u kan ABO,KFO, QBO fi ummata oromoo diineeffachuudhaan lola nu irratti banee jiru irratti kan geggeeffamu ta’uun yeroo tokkollee dagatamuu waan hin qabneef miseensi, deeggartootaa fi ummanni keenya biyya keessaa fi biyya alaa jiru hundi qabsoo karaa nagayaa geggeessaa jiruu fi dhaaba isaa ABO fi QBO tiikfachuudhaaf sochii itti jiru jabeessee itti fufuun akeeka QBO bakkaan gahuuf falmaa mootummaa irratti geggeesaa jiru jabeessaa itti fufee bilisummaa isaa akka gonfatu dhaamna.
Adooleesa 27, 2020
Waa'ee namoota hidhaa jiranii yaaddofne jedhu maatii fi dhaabonni siyaasaa
Waa'ee namoota hidhaa jiranii yaaddofne jedhu maatii fi dhaabonni siyaasaa (BBC Afaan Oromoo) -- Ajjeechaa…